ထိုင်းနိုင်​ငံ ဘန်​​ကောက်​မြို့​မြောက်​ဘက်​ရှိ အမှိုက်​ပြန်​လည်​သန့်​စင်​ရုံ (အမှိုက်ရုံ) သို့ လူကုန်​ကူးခံရသူ မြန်​မာနှင့်​ လာအိုနိုင်​ငံသားများအား ထိုင်းအစိုးရနှင့်​ MAT အဖွဲ့ ပူး​ပေါင်းကယ်​​တင်​ - Eleven Media Group
ထိုင်းနိုင်​ငံ ဘန်​​ကောက်​မြို့​မြောက်​ဘက်​ရှိ အမှိုက်​ပြန်​လည်​သန့်​စင်​ရုံ (အမှိုက်ရုံ) သို့ လူကုန်​ကူးခံရသူ မြန်​မာနှင့်​ လာအိုနိုင်​ငံသားများအား ထိုင်းအစိုးရနှင့်​ MAT အဖွဲ့ ပူး​ပေါင်းကယ်​​တင်​
လူကုန်ကူးခံရသူများအား တာဝန်ရှိသူများနှင့်အတူ တွေ့ရစဉ်
ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်​​ကောက်​မြို့ ​မြောက်ဘက် လူသူနှင့် အလွန်​ဝေးကွာသည့်​ အမှိုက်​ပြန်​လည်​သန့်​စင်​ရုံ (အမှိုက်​ရုံ) သို့ လူကုန်​ကူးခံရသူ မြန်​မာနှင့် လာအိုနိုင်ငံသား ၃၅ ဦးအား ထိုင်းအစိုးရနှင့်​ MAT အဖွဲ့ ပူး​ပေါင်းကယ်​တင်​ခဲ့ကြောင်း သိရသည်​။
ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့မြောက်ဘက် ကီလိုမီတာ ၁၀၀ ခန့် အကွာတွင်ရှိသော လက်လွန်ကယောက်နယ်မြေ၊ မြို့ရွာများနှင့် အလှမ်းကွာဝေးသော လယ်တောစပ်တွင် တည်ရှိသည့် ပလပ်စတစ် ပြန်လည်သန့်စင်သည့် အလုပ်ရုံတွင် ရောင်းစားခံထားရသည့် မြန်မာနိုင်ငံသား အမျိုးသား ငါးဦး၊ အမျိုးသမီး ခုနစ်ဦးနှင့် ခြောက်နှစ်အရွယ် ​ကလေးတစ်​ဦး၊ လာအိုနိုင်ငံသား ၂၂ ဦးအား ထိုင်းလူကုန်​ကူး တိုက်​ဖျက်​​ရေး DSI နှင့်​ ထိုင်းနိုင်ငံရောက်​ မြန်မာနိုင်​ငံသားများအဖွဲ့ MAT တို့ ပူးပေါင်းပြီး သြဂုတ်​ ၁၁ ရက်​၊​ မွန်းလွဲက ကယ်တင်လိုက်ခြင်းဖြစ်​​ကြောင်း MAT အဖွဲ့ ဒါရိုက်​တာ ဦးကျော်​​သောင်းက ​ပြောကြားသည်။
“ထိုင်းအစိုးရ လူကုန်ကူးမှု တိုက်ဖျက်ရေး အထူးထောက်လှမ်းရေး အရာရှိ Pol. Maj. Jatuporn Arunleaktawin Chief of Prevention and Suppression Div.2Anti-Human Trafficking Center , Department of Special Investigation , Ministry of Justice တို့ ဦး​ဆောင်​ပြီး ထိုင်းအစိုးရ လူကုန်ကူး တိုက်ဖျက်ရေး အထူးရဲတပ်ဖွဲ့တို့နဲ့အတူ ပူးပေါင်းကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်​ပါတယ်” ဟု ဦး​ကျော်​​သောင်းက ပြောကြားသည်​။
ယင်းသို့ လူကုန်​ကူးခံရသူများအား ပြန်​လည်​ကယ်​တင်​ရန်အတွက်​ ပလပ်​စတစ်​ပြန်​လည်​သန့်​စင်​စက်​ရုံသို့ ​ရောင်းစားခြင်း ခံရသည့်ဇနီး​မောင်​နှံနှစ်ဦးက သြဂုတ် ၈ ရက်က MAT အဖွဲ့ဒါရိုက်တာ ဦးကျော်သောင်းထံသို့ ဖုန်းဆက်သွယ်၍ အကူအညီတောင်းခံခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်​။
လူကုန်​ကူးခံရသူ၊​ ရောင်းစားခံရသူများမှာ ပွဲစားများ၏ စကားကို အယုံလွယ်​ပြီး တရားဝင် ​အလုပ်​လုပ်​ရမည်​ဟုဆိုကာ ဘတ် ​၁၀၀၀၀ ​ပေးပြီး ထိုင်းနိုင်​ငံသို့ ၀င်​​ရောက်​လာသူများ ပါဝင်​​ကြောင်း သိရသည်​။ လူကုန်​ကူးခံရသူ တစ်​ဦး၏ ပြောပြချက်များအရ ၎င်းတို့သည် မော်လမြိုင်မှတစ်ဆင့် ရေးသို့၊ ထိုမှတစ်ဆင့် ထားဝယ်သို့၊ ထားဝယ်မှ တစ်ဆင့် ထီခိသို့ ပို့သည်။ နယ်စပ်အလည် ဗီဇာစာရွက်လုပ်၍ ထိုင်းနိုင်ငံ အတွင်းသို့ ၀င်ရောက်လာခဲ့ပြီးနောက် နာရီဝက်ခန့် မောင်းသွားပြီးနောက် တောင်ပေါ်တွင် ဘုရားများရှိသည့် နေရာနှင့် မလှမ်းမကမ်းနေရာတစ်ခု လူကုန်ကူးခံရသူ မြန်မာပေါင်း ရာချီ၍ရှိသည့် နေရာသို့ ရောက်ရှိလာခဲ့သည်ဟုဆို​ကြောင်း ဦးကျော်​သောင်းက​ ပြောကြားသည်​။
အဆိုပါ ပလပ်စတစ် ပြန်လည်သန့်စင်သည့် အလုပ်ရုံတွင် လွန်​ခဲ့​သော ၂၀၁၃ ခုနှစ်​ ကလည်း လူကုန်ကူးခံနေရသည့် မြန်မာအလုပ်သမား ၂၆ ဦး (ကျား ၁၀ ဦး + မ ၁၆ ဦး) နောက်တိုးနှစ်ဦး လာအို ၂၄ ဦး (ကျား ၄ ဦး + မ ၂၀) စုစုပေါင်း ၅၂ ဦးအား ထိုင်းအစိုးရ လူကုန်ကူးမှု တိုက်ဖျက်ရေး အထူးရဲတပ်ဖွဲ့ နိုင်း MAT တို့ ပူးပေါင်းကယ်​တင်​နိုင်​ခဲ့သည်​။
ထိုင်းနိုင်ငံ​ရောက်​ မြန်မာနိုင်​ငံသားများအဖွဲ့ (MAT) အဖွဲ့ ဒါရိုက်တာ ဦးကျော်သောင်းက “ထိုင်းနိုင်ငံမှာ လူကုန်ကူးမှု တိုက်ဖျက်ရေး လုပ်ရတာ ပိုမို ခက်ခဲလာတယ်။ လူကုန်ကူးခံရသူတွေရဲ့ အချက်အလက်တွေနဲ့ လူကုန်ကူးမှု ဖြစ်နေတဲ့ နေရာတွေကို ကျွန်တော်တို့ အတိအကျ တင်ပြပြီးတော့၊ မြန်မာသံရုံးက အကူအညီတောင်းခံစာပါမှ လုပ်ပေးတာမျိုး၊ တရားရုံးက ၀ရမ်းရမှ လူကုန်ကူးမှု ဖြစ်နေတဲ့ နေရာကို စီးနင်းဝင်ရောက်တာတို့ လုပ်ပါတယ်။ ထားဝယ်ထီခိလမ်းကြောင်းဟာ ထိုင်း၊ မလေး၊ အင်ဒိုနီးရှားတို့အထိ မြန်မာလူကုန်ကူးဂိုဏ်းနဲ့ ထိုင်းလူကုန်ကူးဂိုဏ်းတွေ ဖမ်းမိတာပဲ။ ကျွန်တော်တို့ ရရှိတဲ့ အချက်အလက်တွေကို နေပြည်တော် လူကုန်ကူးမှု တားဆီးနှိမ်နင်းရေး တပ်ဖွဲ့နဲ့ DSI တို့ကို ကျွန်တော်တို့ အချက်အလက်တွေနဲ့ တင်ပြဖူးပါတယ်။ မလုပ်ကြသေးဘူး” ဟု ဆိုသည်။